360WordPress ကိုဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများ°တွေကို embed. plugins. – ညုခရီးသွားအပေါ် Flatboat goby
လော့ဂ်အင် / စာရင်း လှည်း (0)
ညုခရီးသွားအပေါ် Flatboat goby
နောက်ထပ် Tocan ကွန်ယက်က်ဘ်ဆိုက်
12 Volt DC က Bordelektrik
ဘုတ်အဖွဲ့ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် Rasperey Pi
အထည် & ချုပ်ရိုး
ဗီဒီယိုကို & ဓာတ်ပုံကို
Editor ကို / ဧည့်သည်စာတိုက်မှပေးစာ
အကူအညီ / tutorials
360WordPress ကိုဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများ°တွေကို embed. plugins. Die richtigen Plugins für die Reise Dokumentation.
အားဖြင့် Wilfried Gödert
Dieser Beitrag ist Teil der Serie 360°ကျူတိုရီရယ်.Alle Beiträge anzeigenAlle Beiträge ausblenden
Teil 1: 360WordPress ကိုဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများ°တွေကို embed. plugins ။
Teil 2: Rainers Seiltrick - 360အထူးသဖြင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါး IPhone ကိုပိုင်ရှင်များအတွက်မြင်ကွင်းကျယ်°
Teil 3: လမ်းမြင်ကွင်း: သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် 360 °ဓါတ်ပုံတွေကိုပိုကောင်းအောင်နှင့်ပေါင်းစပ်. တွင်2သိသိသာသာရလဒ်များကိုမိနစ်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။
Teil 4: 360မြင်ကွင်းကျယ်ဓာတ်ပုံ°. ပြန်လည်စဉ်းစားရန်အနည်းငယ်အကြံပေးချက်များနှင့်အချိန်။
ဒီ post ဖြစ်တယ် #1 ၏4စီးရီးအတွက် “360°ကျူတိုရီရယ်”
Rainers Seiltrick – 360အထူးသဖြင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါး IPhone ကိုပိုင်ရှင်များအတွက်မြင်ကွင်းကျယ်°
လမ်းမြင်ကွင်း: သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် 360 °ဓါတ်ပုံတွေကိုပိုကောင်းအောင်နှင့်ပေါင်းစပ်. တွင်2သိသိသာသာမိနစ်ရလဒ်များတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်.
E ကိုငါတို့စာဖတ်သူတွေ၏ ome ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်စမတ်ပစ္စည်းများအကြောင်းကိုနိုဝင်ဘာလအတွက်စိတ်ပိုင်းဖြတ်သိချင်ကြပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါနှစ်စဉ်ထပ်တလဲလဲမေးခွန်းများကိုရည်ညွှန်း ကျေးဇူးပြု. ကွဲပြားခြားနားသောစက်လှေဖိုရမ်၌ရှိ, သင်သည်အဘယ်သို့သောကွောငျ့ဒါပေးဆောင်နိုင်. ဓာတ်ပုံနှင့်ရိုက်ကူးရေး၏ဆောင်ပုဒ်အများဆုံးအားဖြင့်လျစ်လျူရှုနေသည်. ထွက် Wanted ကျနော်တို့နှစ်ဦးကိုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ထုတ်ကုန်များ, အာရှစျေးကွက်အတွက်လတ်နှင့်ဥရောပထဲမှာရရှိနိုင်မဟုတျပါ. ထို့ကြောင့်သူတို့များသောအားဖြင့်အနည်းငယ်သာအာရုံကိုတွေ့ပါ. ထို့အပြင်ခုနှစ်, သငျသညျအလွန်ရှည်လျားပေးပို့ကြိမ်မျှော်လင့်ထားရန်ရှိသည်.
အတူပြဿနာ 360 ဓာတ်ပုံများ: ဤအမှုသည်ငါ့က်ဘ်ဆိုဒ်ထဲမှာငါကိုဘယ်လိုထည့်သွင်းရပါဘူး?
E ကိုines ထိုထုတ်ကုန်အတွက်ဖြစ်ပါသည် Xiaomi က Mijia MI Sphere 360 Kamera. ဒါဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းများစွာသောအခြားကင်မရာများအတွက်သာလွန်ဖြစ်ပါသည်. ကမဆိုအံ့သြစရာဖြစ်ပါသည်, သောဖိုရမ်များအများအပြားပညာရှင်များ cavort.
ငါလမ်း 360 °ဓာတ်ပုံများကိုတွေ့ရှိရသည်အထိငါကိုရှာဖွေ, ဤကင်မရာကိုထုတ်လုပ်, အဆိုပါ WordPress ကိုဘလော့ဂ်ထဲမှာဤနေရာတွင်ထည့်သွင်း. ပေါင်းစည်းဖို့တချို့က plug-ins များကို 360 အကြောင်းအရာအလုပ်လုပ်သို့မဟုတ်သုံးစွဲဖို့အတော်လေးရှုပ်ထွေးနေကြသည်မဟုတ်. A ကောင်းဆုံး plugin ကိုပုဖြစ်ပါသည် WP Photo Sphere Plugin ကို. အရင်ကဆိုရင်ကောင်းစွာသင့်လျော်သည်. မည်သို့ပင်ဆိုစေထိုသို့ဆက်တင်ပေါ်တွင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်ပါသည်. ပုံမှန်ဧည့်သည်များမကြာခဏ Desktop ကိုမှတ်ချက်ချကြဘူး, သူဟာ 360 °ဓာတ်ပုံကိုမြင်သည်ဟု. သူကစိတ်ကူး interagtiv ခံရဖို့မလာဘဲ.
360မြင်ကွင်းကျယ်°ကြည့်ရန်? link ကို click နှိပ်ပြီး. (ပထမဦးဆုံးတစ်ခုမှာ 360 မြင့်မားသောအဓိပ်ပါယျအတွက်ဗီဒီယိုဖိုင်. (အကွောငျး 6000 pixel))
အဆိုပါ plug-in ကိုတော်တော်များများ configuration options ကိုအချင်းချင်း Alia ထောက်ပံ့. image ကိုနှိပ်ခြင်းအားပြီးနောက် link တစ်ခုပေါ်မှာတင်ဆောင်ကြောင်း. ငါကဒီမှာကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးပါအပေါ်သတိပြုမိ, ဒါကြောင့်နှောင့်ယှက်ကြောင်း2360သင့်ရဲ့ပို့စ်များအတွက်°အသုံးပြုမှုပုံရိပ်တွေ. အနည်းဆုံးအချို့စာသားကိုလျှော့ပေးရေးဖို့ပုံရိပ်တွေကြားကရပ်သင့်တယ်. တစ်ဦး 360 အံ့သြသိမ်းသောအခါ၏°ရုပ်ပုံလွှာ2Bilder zu eng beieinander stehen irritiert es den Betrachter. Hier gilt weniger ist mehr. ရည်ရွယ်ချက်အသေးစိတ်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်နှင့်အတူကျနော်တို့ကို full screen mode နဲ့အမြင်မှကြည့်ရှုသူကိုနှိပ်ပါအားပေးနိုင်ကြောင်း. နှစ်ဦးစလုံးပုံရိပ်တွေနဂိုအတိုင်းကျန်ရစ်ခဲ့ကြ. ငါ့ကိုရန်အရေးကြီးပါသည်ပုံရသည်, ထို့အပြင်စာသားအတွက်အနည်းငယ်ထပ်မံချ enem ဆောင်းပါးထဲမှာ 360 ဒီဂရီပုံရိပ်ကိုနေရာ. အဆိုပါဒေတာ volumes ကိုကတခြားပုံရိပ်တွေဘို့ထက်အများကြီးပိုမိုမြင့်မားဖြစ်ကြောင်းနှင့်စာဖတ်သူကိုသူပြီးသားခဏဖတ်ပြီးပြီဆိုပါကသာတွေ့မြင်ရမည့်အချိန်ရုပ်ပုံ get သင့်တယ်.
360မြင်ကွင်းကျယ်°ကြည့်ရန်? link ကို click နှိပ်ပြီး. (L ကို(862.3900,866.7360),R ကို(861.0940,861.9680),အချိုးအစား 0.9960)
360 ဓါတ်ပုံပေါင်းစည်းဖို့နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့လမ်းတစ်ကို virtual tour မှာယူရန်ဖြစ်ပါသည်. ဤတွင်သို့သော်သူကမကြာခဏ သာ. ကောင်း၏, ထိုခရီးစဉ်ကို WordPress အတွက်ပေါင်းစည်းမရနိုငျဒါပေမယ့်ဝင်းဒိုးအသစ်တစ်ခုအတွက်အမှတ်အသားပုံရိပ်အပေါ်ကို virtual tour မှာနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ကဒီမှာဖွင့်လှစ်. တခါကကြိုးစားပါနှင့်ပုံရိပ်ပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ.
Xiaomi က Mi မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကိုဖြည် 360 ခရီးစဉ်
အောက်မှာ Filed 360, ယေဘုယျအားဖြင့်
အပိုဆောင်းအရည်အချင်းများဆေးဘက်ဆိုင်ရာကွန်ပျူတာသိပ္ပံနှင့်အတူဆရာဝန်. ခွဲစိတ်ခန်းသုံးတူရိယာ Tocan.de Store ကို၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုတာဝန်ရှိသည်. 30 အဆိုပါအလွဲသုံးစားမှုများတွင်အတွေ့အကြုံအနှစ်. ဤအ router များနှင့်လက်တွေ့ပစ္စည်းများဖို့ OpenWRT VPN ကို router ကိုနှင့်စီမံကိန်းများကိုကိုယ်တော်အားဖြင့်အဘို့ဂရုစိုက်နေကြသည်. အကျိုးစီးပွား: ကွန်ယက်နှင့်ဒေတာလုံခြုံရေး, မူလစာမျက်နှာအလိုအလျောက် ...
ယခင် Post မှဥရောပလိုက်နာကြိမ်နှုန်းအပေါ် Xiaomi က Mi မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ချိန်ညှိခြင်း. ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်.
next PostRainers Seiltrick – 360အထူးသဖြင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါး IPhone ကိုပိုင်ရှင်များအတွက်မြင်ကွင်းကျယ်°
တပ်မက်သောစိတ်ကောက်ကာငင်ကာတစ်ခုခုထုတ်ဝေရန်? သငျသညျအရပျတှငျနထေိုငျ, အရာမရှိမဖြစ်၏ခရီးသည်နှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာရုပ်ပုံများနှင့်အတူအရပျသို့မဟုတ် port ကိုစိတ်ကူးချင်တယ်?
ဒီနေရာတွင်တိုက်ရိုက်သင့်ရဲ့အလှူငွေမှပုံရိပ်များဖန်တီး upload တင်လို့ရပါတယ်. ကျနော်တို့ထို့နောက်အွန်လိုင်းသင်တို့အဘို့အလှူငွေစေမည်.
360, အကူအညီ / tutorials
ဒီ post ဖြစ်တယ် #4 ၏4"စီးရီးအတွက်360°ကျူတိုရီရယ်” (ချဲ့ရန်ကလစ်နှိပ်ပါ) 360WordPress ကိုဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများ°တွေကို embed. plugins. Rainers Seiltrick – 360များအတွက်အထူးသမြင်ကွင်းကျယ်°… ဆက်ဖတ်ရန်
အားဖြင့် သူတို့က Daniela play
ဒီ post ဖြစ်တယ် #3 ၏4"စီးရီးအတွက်360°ကျူတိုရီရယ်” (ချဲ့ရန်ကလစ်နှိပ်ပါ) 360WordPress ကိုဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများ°တွေကို embed. plugins. Rainers Seiltrick – 360များအတွက်အထူးသမြင်ကွင်းကျယ်°… ဆက်ဖတ်ရန်
Rainer: “P.S.: အဆိုပါ “IPhone ကိုရှေးခတျေ” ငါငါ့ကိုလည်းနောက်ကွယ်မှ – ဒီနေရာမှာတစ်ဦးလှည့်ကွက် (တင်းနစ်လိုင်းများကိုရှောင်ကြဉ်ရန်;) သေးငယ်တဲ့စုတ်ယူခြင်းခွက်တစ်ဦးကကြိုး (မိုဘိုင်းဖုန်းများများအတွက်) တဦးတည်းအခြမ်းနှင့် loop တစ်ခုအပေါ် (အဆိုပါဖိနပ်များအတွက်) အခြားတစ်ဖက်တွင်. ဒါကြောင့်သင်ကစဉ်ဆက်မပြတ် nadir အချက်ရှိသည်နှင့် Panos စိတ်လှုပ်ရှားနေကြသည် … အဆိုပါတစ်ခုခုလိုအပ်ချက်များအတွက်;)”
360WordPress ကိုဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများ°တွေကို embed. plugins.
ငါတို့စာဖတ်သူတွေ၏အချို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်စမတ်ပစ္စည်းများအကြောင်းကိုနိုဝင်ဘာလအတွက်စိတ်ပိုင်းဖြတ်သိချင်ကြပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါနှစ်စဉ်ထပ်တလဲလဲမေးခွန်းများကိုရည်ညွှန်း ကျေးဇူးပြု. ကွဲပြားခြားနားသောစက်လှေဖိုရမ်၌ရှိ, သင်သည်အဘယ်သို့သောကွောငျ့ဒါပေးဆောင်နိုင်. ဓာတ်ပုံနှင့်ရိုက်ကူးရေး၏ဆောင်ပုဒ်အများဆုံးအားဖြင့်လျစ်လျူရှုနေသည်. ထွက် Wanted ကျနော်တို့နှစ်ဦးကိုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ထုတ်ကုန်များ, အာရှစျေးကွက်အတွက်လတ်နှင့်ဒါဥရောပတိုက်တွင်ရရှိနိုင်မဟုတျပါ. ထို့ကြောင့်သူတို့များသောအားဖြင့်အနည်းငယ်သာအာရုံကိုတွေ့ပါ. ထို့အပြင်ခုနှစ်, တဦးတည်းအလွန်ရှည်လျားပေးပို့ကြိမ်နှင့်အတူရေတွက်ရမယ်.
ယေဘုယျအားဖြင့်, ဇိမ်ခံ & ennoble
protected: ဥရောပလိုက်နာကြိမ်နှုန်းအပေါ် Xiaomi က Mi မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ချိန်ညှိခြင်း. ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်။
ဒီ protected ပို့စ်ကြောင့်အဘယ်သူမျှမကောက်နုတ်ချက်ရှိပါတယ်.
ငါတို့သည်ဤအချက်တစ်ဦးမင်္ဂလာရှိသောနှစ်သစ်မှာသင်တို့ရှိသမျှဆန္ဒရှိချင်ပါတယ်. အမြဲတမ်းလက်ကျယ်ပြန့်ရေ Keel အောက်မှာ. Wilfried & Daniela Related Posts မှတ်ချက်များ Comments
protected: ပုံကြီးချဲ့ခြင်းနှင့်ဥပဒေရေးရာသို့မဟုတ်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောတစ်အပျော်အပါးယာဉ်များအတွက် Class A AIS transponder?
ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များ: မှူးဖုန်စျေးပေါများအတွက် 4K နှင့် Gimbal နှင့်အတူ Xiaomi က Mi မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အသစ်ကမော်ဒယ်
မကြာသေးမီဖြစ်ရပ်များကနေသူတို့အဘို့အတိုမက်ဆေ့ခ်ျကို, အများဆုံး “Black ကသောကြာနေ့” မဝယ်ချင်, အဲဒီမှာဒါခေါ်နေသည် “Xiaomi ကငါ Volksdrohne” ၏Schnäpchenpreisများအတွက် 309.- ယူရို Bei Banggood.
မှူးများအတွက်ခရစ္စမတ်: ဥပမာအား – Xiaomi က Mijia သည် Mi Sphere 360 ​​° Kamera
ကျွန်မလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကပထမဆုံး Go ကို Pro ကိုကင်မရာတဦးတည်းဝယ်ယူခဲ့ (ငါနေဆဲပိုင်ဆိုင်) နှင့်အတော်လေးအထူးသဖြင့်အနိမ့်အလငျး၌, အရည်အသွေးနှင့်အတူစိတ်ပျက်ခဲ့သည်. နောက်ပိုင်းတွင်တစ်ဦးသွားလာရင်းထို့နောက် Pro ကို လာ. ,3အပြင်, ဒါပေမဲ့ဒီလျင်မြန်စွာသင့်ရဲ့ပိုင်ရှင်ပြောင်းလဲသွားတယ် (ခိုးခြင်း). အများအပြားထည့်သွင်းစဉ်းစားနွေရာသီ လာ. ပြီးနောက်2တရုတ် ADDED ထံမှကင်မရာများ (စြေး 25.- အားလုံးဆက်စပ်ပစ္စည်းနှင့်အတူယူရို! ငါတော်တော်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်. အဆိုပါချက်ပြုတ်ဗီဒီယိုသည်ဤကင်မရာကိုအတူအလွန်နိမ့်အလင်းမှာတမင်တကာပစ်ခတ်ခဲ့သည်. ငါပြီးသား YouTube ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုဂ္ဂလိကဧရိယာထဲမှာအနည်းငယ်သောဗီဒီယိုများအပ်လုဒ်လုပ်ထားကြပါပြီပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်မှုများအဘို့. တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်အတွက်တစ်ခုခုမှသွား. သို့သော်ယနေ့ပြုလုပ် Xiaomi က Mi Mijia Sphere 360 ​​°ကင်မရာအကြောင်း.
သောခရစ္စမတ်သစ်ပင်အောက်၌သင့် 2017 ချို့တဲ့မဟုတ်. GOPRO ကုမ္ပဏီနှစ်ခုမပေါင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့ကင်မရာ° MI 360?
သာ2နှစ်ပေါင်းစောင့်ဆိုင်း. လာမယ့်ရွက်သည်အထိ. ထိုသို့ဆက်ဆက်လိမ့်မည်, အချို့အတွက်, အကောင်းတစ်ဦးနှာခေါင်းရှိသည်သော, ခရစ္စမတ်သစ်ပင်အောက်၌အထူးကင်မရာဖြစ်လိမ့်မည်. အဘယ်သူမျှမ… ဆက်ဖတ်ရန်
Daniela Tocan နှင့် Wilfried Gödertအားဖြင့်ဤလုပ်ငန်းကိုတစ်အောက်မှာလိုင်စင်ရဖြစ်ပါတယ် ကို Creative Commons Attribution - ရောနှောအခြေအနေများ Share 4.0 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Lizenz. သငျသညျအောကျနယ်ပယ်ကျော်လွန်ဒီလိုင်စင်ခွင့်ပြုချက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးဖတ်နိုင် http://tocan.de ရ.
သူတို့က Daniela play အပေါ် ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်က: Epever-eBox-WIFI-01 Wi-Fi ဆာဗာ / RS485 zu Wi-Fi Adapter ကို
Diako အပေါ် ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်က: Epever-eBox-WIFI-01 Wi-Fi ဆာဗာ / RS485 zu Wi-Fi Adapter ကို
Judith လော်ရာ အပေါ် လှေများအတွက်အကောင်းဆုံးတစ်လောကလုံးနေရောင်ခြည်နှင့်ဘက်ထရီမော်နီတာမသာ (ဗီဒီယို & တိုက်ရိုက် Demo)
သူတို့က Daniela play အပေါ် Tracer 1210 တစ်ဦးက, အကူအညီ!!!
သူတို့က Daniela play အပေါ် float switch ကို
EPever eBox-01 Wi-Fi module ကိုနည်းလမ်း restore
EPEVER Tracer MPPT တစ်ဦးကစီးရီးနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး Charge Controller ကိုလက်စွဲစာအုပ် (Deutsch)
ဆော့ဖ်ဝဲနှင့် EPever FlashTools အပါအဝင်အပြီးအစီး software ကိုအထုပ် (ZIP ဖိုင်)
© 2016 - 2017 Tocan အားဖြင့် Powered ဥရောပမှာခရီးစဉ်အပေါ်တစ်ဦးသင်္ဘော Goby